Ny tsara hofantatra alohan'ny hametraka demission! Sao dia mijabaka eo - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Ny tsara hofantatra alohan’ny hametraka demission! Sao dia mijabaka eo
Matoa izay mieritreritra hametraka demission defa manomboka tsy milamina ny ao an-tanàna. Na ny tompon’ny orin’asa no manaintaina na ny chef d’equipe na ianao mihitsy no efa demotivé. De mieritreritra hiova asa na hanangana ny azy. Fa satria mbola hiaina amin’io situation io ihany raha mbola miasa amin’ny orin’asa hafa dia eo mahatonga ny ankamaroan’olona manangana ny orin’asany. Miandry tataka de miala ihihihi! Inona moa zany, miandry mahazo kil 1 amin’ny ketrika aty ambadika mba afaka atao tetezamita de miala. Tena mety tokoa izay fa tsy tonga dia manao chute libre fotsiny. Kanefa izao no tadidio ny olona rehetra afaka ho mpandraharaha fa tsy holasa mpandraharaha daholo. Mila fahaiza-manao ny hotonga Entrepreneur fa tsy hoe nahazo kil 1 de m-demissionner. De ahoana raha niala tampoka io kil 1 nao io na koa tara ny payement nefa ianao tsy maintsy andoha hofantrano sns. De ahoana? Ny entana ao an-trano no amidy? Tsy vahaolana izany. Miditra risque be ianao raha izany de mbola mampiditra risque famille-nao araka no resahako tamin’ny article iray iny. Inona ary no atao?
Rehefa tena sura vao mametra-pialana
Ny tsara homarihina aloha dia tsy afaka mivelatra tsara ianao amin’ny orin’asanao raha mbola miasa amin’ny an’olona satria vao hanao zavatra dia mataotra ny contrat ary sao dia torin’ny orin’asa eo. Ohatran’ny ahy zao dia efa nahazo avertissement global 2 sy ecrit 1 noho ny fanatanterahako ny reve-ko io no sady miasa amin’ny orin’asa. Kanefa kosa aza mieritreritra fa ohatran’ny fiananao amin’izao (salarié izao) ny fiainan’ny entrepreneur: risque be no hiainana. Raha mbola amin’ny orin’asa ianao dia mieritreritra fa la vie est belle izany miasa hoan’ny tena izany fa rehefa tonga ao de mijoboka. Satria raha vô misy kil 1 miala fotsiny defa tady hianjera na mianjera mihitsy. Ny mety na mampiasa vola ianao sady miasa amin’ny orin’asa ihany de rehefa miala de iny vokatra azo amin’iny vola iny no hiainana na manana kil 3 farafahakeliny ka raha mba miala ny iray dia mbola misy 2 foana. Tamin’ny ahy izao dia isakin’ny 2 volana ny kil vao mandefa vola de voatery namidy ny entana tao an-trano sy ny zavatra mety hamidy mba ahafahana miaritra. Ka noho izany mba ataovy 3 farafahakeliny kil vao miala de tafa io.
Azo atao tsara ny miala sady manatsara fihavanana @ mpampiasa ankehitriny
Na ny mpampiasa mitady fika hanaratsiana anao na ianao no manondrana de lasa lonilony hoan’ny roa tota ny fametra-pialana. Fa ny tsara anefa dia mitady fika mba hanohizana ny fiaraha-miasa amin’y orin’asa ihany rehefa tsy miasa ao intsony. Fa satria tsy mbola fantatra na hipôka na tsia ny bizina-nao io na tsy maintsy hiverina amin’ny orin’asa io ihany rehefa tsy nety ny aventure. De ny mety mproposer amin’ny orin’asa karazana sous-traitance na freel. Raha tena nampandroso an’io orin’asa niasanao amin’izao io ianao dia hanaiky ny fiaraha-miasa aminao ihany ny orin’asa fa kosa raha mpandany vola fotsiny de zarany aza nametra-pialana fa tantara be ny mandroka piasa.Ny tiana ambara atoavy izay ahatsara fihavanana aminao @ io orin’asa iasanao amin’izao io na dia efa miala aza fa nisy soa azonao betsaka ihany tao aminy. Iza koa moa no mahalala raha io projet ketrehinao io, ny orin’asa iasanao amin’izao ihany ny ho partenaire amin’izany!
Ataovy mameno sac à dos ny courage sy ny perseverance
Tsy mora ny manangana ny orin’asa hoan’ny tenany izany fa ilana courage betsaka mihitsy, ary mandalo sedra isan’andro. Betsaka ny risque hatrehana fa rehefa determiné ianao de tafa ihany. Raha tsy mahazaka lazon’ady ny mety dia miverina amin’ny orin’asa de rehefa 60 ans de milahatra CNAPS.
Famintinana: Na miasa orin’asa ianao na miasa hoan’ny tenanao, safidy io, dia anjaranao no manatsara ny safidinao.
Ny karama sy famille foana sacrer-na isakin’ny te hanao projet! Aok’izay!!
Ny Tantsaha no ataovy fakahan-tahaka raha te hampitombo ny fidiram-bola